The Escort – Link2| MM Movie Store
The Escort – Link 2
အသက် ၂၅ပတ်ချာလည်သူဌေးသား လူငယ်တစ်ယောက် ။ဂျာနယ်လစ်သတင်းရေးသူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ။
သူ့မှာ sex addict ဆိုတဲ့ sex မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့ရောဂါရှိတယ် ။ dating apps တစ်ခုထဲက ကြုံရာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ sex လုပ်ရင်း တစ်ဖက်က အလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်ရင်း RS မရှိဘဲ နေထိုင်နေတယ် ။တစ်နေ့မှာတော့ သူ့အလုပ်က သူ့ကို အကြောင်းမယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ အလုပ်ထုတ်လိုက်တယ် ။ လေလွင့်သွားလာရင်း ဘားတစ်ခုမှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တယ် ။
ကောင်မလေး က စတန်းဖို့ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရထားတဲ့ ပညာတတ်မိန်းကလေး ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးက Escorts ခေါ်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေကို ကြေးကြီးကြီးနဲ့ ဖျော်ဖြေရတဲ့ အထက်တန်းစား ရွှေကြာ အလုပ်ကို လုပ်နေတယ်လို့ပြောလာတော့ သူအံ့သြရတယ် ။ဒီလိုနဲ့ ထိပ်တန်းမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ အလုပ်ရဖို့အတွက် ဒီမိန်းကလေး အကြောင်းကို ( မိန်းကလေး အမည်မဖော်ပြဘဲ ) သူရေးချင်လာတယ် ။ မိန်းကလေးကို ခွင့်တောင်းတော့ အပြန်အလှန် အခြေအတင် ပြောကြရင်း မိန်းကလေးနဲ့ အချိန်တချို့ တွေ့ဆုံပြီး အင်တာဗျူ းခွင့် ရလာတယ် ။ သူတို့အတူတူ ရှိလာတဲ့ အခါ ဒီလိုအထက်တန်းစားပညာတတ်တစ်ယောက်က ဒီလို အလုပ်မျိုးဘာလို့လုပ်ရလဲ ?
သူလိုသူဌေးသား တစ်ယောက်ကရော အခန်းခတောင်ပေးဖို့ခက်ခဲရတဲ့ ဘဝမှာ ဘာလို့ ကျင်လည်နေရလဲ ? ဒီလိုမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေ ကြားမှာ သံယောဇဉ်ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြလဲ ? တစ်ဖက်က sex addict နဲ့ တစ်ဖက်က ရွှေကြာ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ လက်တွဲမလဲ ? ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ လမ်းခွဲမလဲ ? ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ။18+ အနည်းအကျဉ်းပါတယ်ဆိုပေမယ့် dialogue တွေ သွက်သွက်လက်လက် သရုပ်ဆောင် ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Romance ကားလေးတစ်ကားပါ ။ အထူးသဖြင့်တော့ မိန်းကလေး သရုပ်ဆောင်ပါ ။ စတန်းဖို့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရမို့ အထက်တန်းစားမိန်းမတစ်ယောက်လို ထက်ထက်မြက်မြက် ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်တယ် ။ တစ်ဖက်ကလဲ ရွှေကြာ အလုပ်လုပ်နေတာမို့ ကလက်သလို စရိုက်ကျကျနေရတယ် ။ ဒီဆန့်ကျင်ဘက် စရိုက်နှစ်ခုကို ပေါ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာ သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ် ။ဇာတ်ကားအပြီးမှာမေးခွန်းလေးတွေ ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ် ။ လှောင်တဲ့အနေနဲ့ မေးရင် ” ဖာတောင်မှ ပညာတတ်ရင် လေးစားစရာကောင်းတယ် ” လို့ပြောချင်တာလားပေါ့ ။ အတည်အနေနဲ့မေးရင်တော့ ” sex နဲ့ အချစ်ဟာ ဘာကွာလဲ? sex က အချစ်အပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးလဲ ? sex history က အချစ်ထက်အရေးကြီးသလား ?
Oversize Love ( 2020 )